Snapshot: Wyne Su and Her Buddy Landed Mandalay | Myanmar Celebrity Gossip & News
Snapshot: Wyne Su and Her Buddy Landed Mandalay
Here are snapshot photos of Wyne Su Khine Thein and Her Buddy at Mandalay International Airport. Wyne Su will perform for Alpine Mandalay Thingyan Stage. Couples seem to enjoy their Honeymoon Thingyan Trip as well.
၀ိုင်းစု နဲ့ ချစ်သူ အသစ်
Wyne Su and Her Boyfriend @ Mandalay International Airport
gniapaingApril 12, 2012 at 8:45 PMမမှတ်သေးဘူး ထင်တယ်ReplyDeletekhinApril 12, 2012 at 10:09 PMဘာဖြစ်လို့ လဲReplyDelete၇ဲApril 12, 2012 at 10:09 PMမှတ်စရာလားးးးးးးးးးးးကောင်းတာကလည်း ကြည့်ဦးလေလို့...ဟွန့်......ReplyDeleteaungApril 13, 2012 at 3:40 AMဇော်ကြီးမက်လောက်စရာ တကွက်မှမရှိ....ReplyDeletezawzaw572April 13, 2012 at 5:55 AMစ်ိတ်ကြိုက်မဆွဲခံရသေးတော့ မမှတ်ဘူးပေါ့.......... ငါလဲ ဆွဲမယ်နော်.......အဟိ............ReplyDeleteRepliesjokerApril 20, 2012 at 2:01 AMဘာလဲ . .အမဲရိုးလားDeleteReplykyawkyawzinApril 13, 2012 at 10:10 AMတို့ လဲခေါ်လေ...သူငယ်ချင်းတို့ ....ReplyDeleteUnknownApril 13, 2012 at 11:05 AMအကျင့်စာရိတ္တပျက်လာပြီဆိုရင်ဘာကိုမှဂရုမစိုက်တော့ဘူး လူကြားသူကြားသွားလာတာတောင် မဆင်မခြင်နေတတ်လာပြီ မကြာခင် မြောင်းထဲရောက်တော့မယ်ReplyDeleteRepliesbanana julyApril 14, 2012 at 2:05 PMသူများကို ပဲ အမြဲပြောနေကြတော့မှာလား... ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါနော်.. တယ်နော့ ကုိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာလဲ မျက်ချေးတွေ အမှိုက်တွေ အပြည့်နဲ့ပါဆိုတာ သိတယ်နော်..Deletesoe soeApril 15, 2012 at 11:15 AMလူတွေကမွေးလာကတည်းကမှားတာပါ..ဆက်မှားနေလဲသဘာဝပါပဲ.. သဘာဝဆိုတာဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရတဲ့အရာလေ........DeleteReplymingalar ba!April 13, 2012 at 12:55 PMwhy you all are going after her! Wynesu is same as like you and me that means she isahuman being like you and me!SO STOP!!!!!Atlanta,Georgia,United State of AmericaReplyDeleteJohnApril 13, 2012 at 7:36 PMနေကြပါဦး မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်ပီးနောက်ရည်းစားတစ်ယောက်ထားတာ အပြစ်ကြီးလား....သူငယ်သေးတာပဲ ပြောနေလိုက်ကြတာများကိုယ့်မှာညီမမရှိတဲ့အတိုင်းပဲReplyDeleteRepliesbanana julyApril 14, 2012 at 2:06 PMဟုတ်တယ်.. အခု လို မကောင်းရေးတဲ့သူတွေက မှာ ပိုဆိုးအုံးမယ်သိလား..နော်Deletelove not for saleApril 20, 2012 at 1:42 PMဟုတ်တယ်။တဖတ်သားကိုမတရားပြောတတ်ကြတဲ့လူတွေ.....သူတိုါညီမတွေဆိုပိုလို့တောင်ဆိုးအုံးမယ်။။။....DeleteReplytipsyazn.April 13, 2012 at 8:27 PMthat right..don't make fun of her, you will regret it...ReplyDeletehoneyApril 13, 2012 at 9:00 PMဘာဖြစ်လို့တဖက်သားကိုထိခိုက်အောင်ပြောဆိုနေတာလဲ။ချစ်သူတွဲတာဘာဆန်းလို့လဲ။နှမချင်းစာနာစိတ်ထားပေးပါ။ReplyDeleteRepliessoe soeApril 15, 2012 at 11:17 AMဒီမှာတွဲချင်တော်မတွဲရဘူး........DeleteMr.KaungApril 17, 2012 at 2:38 AMAre you The King of Myanmar?Why do you want to make what you want?Do you understand Human Rights?And do you know about Wine Su Like her self?Do you have BRAIN?DeleteThet AungJuly 31, 2012 at 4:07 AMတွဲချင်ရင် ကြိုးခုန်လေ...ဟိဟိDeleteReplyhoneyApril 13, 2012 at 9:12 PMဘာဖြစ်လို့တဖက်သားကိုထိခိုက်အောင်ပြောဆိုနေတာလဲ။ချစ်သူတွဲတာဘာဆန်းလို့လဲ။နှမချင်းစာနာစိတ်ထားပေးပါ။ReplyDeleteRepliesYe`April 19, 2012 at 7:15 AMချစ်သူတွဲတာတော့ မဆန်းဘူးပေါ့ ညီမရယ်.. ဒါပေသိ စင်ကာပူတယောက် ရန်ကုန်တယောက် တွဲပြီး ပြိုင်ခံနေတာမျိုးတို့.. နေပြည်တော်ထိ တကူးတက သွားခံနေတာမျိုးတို့ကျတော့ နည်းနည်းတော့ ဆန်းတာပေါ့ဗျာ.. အဟက် အဟက်..DeletejokerMay 2, 2012 at 4:03 AMဟုတ်ပ.........ဟုတ်ပ.........DeleteReplyUnknownApril 13, 2012 at 9:21 PMချစ်တဲ့သူတိုင်းညားကြပါစေ။ReplyDeleteaung myo myoApril 13, 2012 at 11:13 PMညားညားမညားညား ချစ်ကြပါစေ။ :PReplyDeleteRepliesWhite TigerApril 14, 2012 at 5:03 AMAny how do....DeleteReplyMr.KaungApril 14, 2012 at 5:22 AMဆွေးပြီ...ReplyDeleteP.PApril 14, 2012 at 7:17 AMZaw Zaw နဲ့ Kyaw kyaw Zin သောသောအရှတ်မရှိတာပဲနော် ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုကိုယ်ဘာသာဖေါ်ပြနေတယ်ရှတ်ဖို့ကောင်းလိုတ်တာ တကယ်ရှတ်ရမှာက ၀ိုင်းစုမဟုတ်ဘူးနင်တို့ReplyDeletejohnnyApril 14, 2012 at 8:35 AMdamn..her pussy is already dead..!fuck off!ReplyDeleteRepliesmoeminApril 20, 2012 at 4:20 AMအဲ့ လို ပြောဖို့ တော့မကောင်းပါဘူး....ဗမာလို ပဲပြောပေါ့လို့ DeleteReplynavy navyApril 14, 2012 at 11:38 AMwow you guy are really dirty talk .ReplyDeletewathoApril 14, 2012 at 11:47 AMမိန်းကလေးတယောက်ကို......အဲလောက် ရိုင်းစိုင်စွာမဟြေသင့်ပါဘူး....သူမကောင်းရင်သူသမိုင်းပေါ့....ကိုချင်စာစိတ်လေးတော့ ထားသင့်ပါတယ်....ReplyDeleteUnknownApril 14, 2012 at 9:46 PMhow do u know that it is sure? what do u think how everybody get off the plane?ReplyDeletesaiApril 15, 2012 at 3:36 AMငါလည်းရေးမယ် ဒါပေမယ့် ကို့ ရဲ့ အရေးအသားနဲ့ သဘောထားက မိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်ကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာသတိပြုပါ.ReplyDeleteReplieslove not for saleApril 20, 2012 at 1:46 PMဟုတ်လိုက်တာ။DeleteReply10022010April 16, 2012 at 9:57 AMYan tway pal phyit nay kya talA sa ka htal ka bar ma ma yay yin yan ma phyit buReplyDeletechitminhunnApril 17, 2012 at 12:55 AMနေတာထိုင်တာဆင်ချင်သင့်တာ မိန်းခလေးတယောက် အတွက်ပါ။ReplyDeleteThiHaApril 17, 2012 at 5:54 AMပြောင်းလဲလာတာကို ဘာဖြစ်လို့တားနေကြတာလဲ သူသဘောလေးအတိုင်းထားလိုက်ပါလားကိုယ်တိုင်မလုပ်ရတော့ မရိုးမရွဖြစ်နေတာလား..။ဘာသာရေးတင်းကျပ်နေတဲ့တိုင်ပြည်မှာတောင် ထိန်းလို့မရဘူး...။အားလုံးကိုအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့ နေလိုက်ပါ အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပါ...။ReplyDeleteJunnineApril 17, 2012 at 7:12 PMYes all is Right.ReplyDeletebeethoven's violinApril 17, 2012 at 10:49 PMမက်လောက်စရာအကွက်တွေဘာများရှိနေပါလိမ့်ReplyDeleteDream HouseApril 18, 2012 at 1:37 AMကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရမယ်ReplyDeleteBEAUTYApril 18, 2012 at 10:57 PMတယောက်မကောင်းလို့တယောက်ပြောင်းတာဘာဖြစ်လဲ...............ယောင်္ကျားတွေကလေသူများတွေကိုသာပြောချင်တာ သူတို့ဘက်ကမကောင်းတာတွေသစ္စာမရျိတာတွေကျမပြောကြဘူး တော်တော်ရယ်ရတဲ့လောကကြီးပဲ သူတို့နောက်တယောက်ပြောင်းရင်ကျတော့ဘာမှထွက်မလာဘူးReplyDeleteRepliesmoeminApril 20, 2012 at 4:27 AMကောင်းတဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ လည်းရှိပါတယ်ကွာ....ယောကျာ်းတွေ မကောင်းရင် မင်းတို့ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဂုဏ်ပုဒ်တွေ လုံးလုံးမယုတ်ကျသွားပါဘူးကွာ....။မင်းတို့ မိန်ကလေး တွေနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားရင် တော့ ယောကျာ်းလေးတွေ ကျောပေါ်မှာ နွားဆိုတဲ့ စကားလုံးက အော်တို ရေးပြီးသားမို့ ....မင်းတို့့ပြောင်းရင် မင်းတို့ ရေးတယ်ဆို ပြီးအော်တို အသံ ထွက်လာတာနေမှာပါ....။DeletebigboyApril 22, 2012 at 6:33 PMမှန်လိုက်လေ.....ဖားတုလို့ ခရုခုန်ဖင်ကျိုးရုံပဲရှိမပေါ့ Delete:DJuly 15, 2012 at 7:40 AM:D Taw Taw Nouk Tar Pe` ....Deletedream worldNovember 2, 2012 at 6:31 AMma kg tae youk kyar tawe ka po myar par tal.i tawe tine chay sayy chin kya tar layDeleteReplyYe`April 19, 2012 at 7:04 AMဟေ့ကောင်တွေ ပြောမနေကြနဲ့တော့ကွ.. ဒီခေတ်ကြီးက တယောက်မကောင်း တလလောက်နေရင် တယောက်ပြောင်းပြီး အနှိုက်ခံ ဟိုတယ်တက်အလုပ်ခံနေကြတာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းတယောက်တည်း မဟုတ်တော့ဘူးဟေ့.. တနေရာမှာ တယောက်နဲ့မ၀လို့ နောက်တနေရာမှာ နောက်တယောက်နဲ့ ခံနေတာ.. မင်းတို့ပြောလဲ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းလို ကောင်မမျိုးက သနားသေးတယ် ပြောလိမ့်မယ်... အဲဒီတော့ ဒီလိုစောက်ရှက်မရှိတဲ့ ကောင်မမျိုးတွေကို အခွင့်အရေးရတိုင်းသာ များများလုပ်.. ကိုယ့်အတွက်လဲ အကျိုးရှိတယ်.. သူတို့လဲ အယားပြေတယ်..ReplyDeleteReplieslove not for saleApril 20, 2012 at 1:56 PMဟေံယောင်မင်းအမေကငါ့အထင်ဝိုင်းစုထက်ပိုးလိမ့်မယ်။မင်းလဲအယားပြေချင်တယ်နဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်ဆိုစကားထဲကဇာတိပြတယ်ညေ။မင်းအတွက်အမင်းလဲအယားပြေချင်ရင်မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့မင်းအမျေပိုခံခိုင်လိုက်ပေါ့။ပြီးရင်မင်းမ၀သေးရင်မင်းအမကိုခေါ်ထည့်လိုကါပေါ့။ဟေ့ယောင်ငါပြောတာရှင်ရဲ့လား။။ဟားဟားဟားDeleteYe`April 21, 2012 at 1:04 AMဟေ့ကောင်ရေ ငါ့အမေက ၀ိုင်းစုထက် ဆိုးလားမဆိုးလားတော့မသိဘူး ဒါပေမယ့် ငါ့အဖေတယောက်တည်း အလုပ်ခံပြီး အိမ်မှအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ မိန်းမကြီးပါကွာ.. မင်းတို့ဟာမလိုတော့ ဟိုတယ်တက်ပြီး လူတကာအလုပ်ခံနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးကွ... ငါ့အမကလဲ အခုအသက်၄၀အထိ မြန်မာထဘီဝတ်ပြီး သူ့မိသားစုနဲ့သူ ရိုးရိုးသားသား ရှာဖွေစားသောက်နေတဲ့ မိန်းမမျိုးပဲကွ.. စင်ပေါ်တက် အဖုတ်တ၀က်လောက် ပေါ်အောင်ဝတ်ပြပြီး ဈေးခေါ်နေတဲ့ ကောင်မမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးဟေ့.. မင်းတို့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဆိုတဲ့ဟာက ဘယ်လောက်တွင်းကျယ်နေပြီလဲဆိုတာ လုပ်ဖူးတဲ့ကောင်တိုင်း သိတယ်ကွ.. မင်းလဲသိအောင် ကြိုးစားလိုက်ဦး.. တခုတော့ရှိတယ်ကွ.. မင်းက စောက်စုတ်စောက်ပြတ်ကောင် ဆိုရင်တော့ အလုပ်ခံဖို့မပြောနဲ့ အနားတောင်ကပ်လို့ မရလောက်ဖူးဟ.. ငါပြောတာကောရှင်းရဲ့လား... ဟားဟားဟားDeleteReplynyoApril 19, 2012 at 8:40 PMလူဆိုတာ ကိုယ်.သမိုင်းကိုယ်ေ၇းကြသည်..မှားဘူးခဲ.၇င်မှန်အောင်ကြိုးစားပါReplyDeleteHorny GoatApril 20, 2012 at 5:35 AMအခုလိုဘာမဆိုတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကောင်မတွေဈေးကျမှ ချောင်ချောင်ချိချိစားရမှာ။ReplyDeleteReplieslove not for saleApril 20, 2012 at 2:01 PMဟုတ်လားဒါဆိုမင်းညီမဘယ်ဈေးလဲ။အပျိုစစ်ရင်တော့ဈေးကောင်းပေးမှာပါ။မစိုးရိန်ပါနဲ့။အချင်းချင်းတွေပဲသက်သက်ညာညာလုပ်ပါ့မယ်။။ဟားဟားဟားDeleteReplync11April 20, 2012 at 11:38 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteeikoApril 21, 2012 at 8:37 AMkya naw chit tae xxx Winee Su xxx 1 yout...Twe tone ka yoo pone nae xxxReplyDeletesoeminApril 21, 2012 at 10:02 AMStop all I love sheReplyDeleteTun TunApril 21, 2012 at 2:38 PMဒီကိစ္စတွေအတွက်ဘာကြောင့်များပြသနာတွေဖြစ်နေကြရတာလဲကွာမလေးကတရုတ်တွေတရုတ်မတွေဆိုရင် ဒီလိုပဲသူတို့boyfriendတွေနဲ့ခပ်ငယ်ငယ်လောက်ထဲက ဖြစ်နေကြတာ သူတို့ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ နောက်နေ့ကျရင်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ။ကောင်လေးတွေကလည်းကောင်မလေးသိက္ခာကျအောင် ဘယ်သူမှတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မပြောကြဘူး ကောင်မလေးလဲအချိန်တန်ရင် သူ့ဘာသူယောင်္ကျားယူသွားကြတာပါပဲ ဒါကလည်းပိုဆိုးသွားအောင်အားပေးအားမြောက်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး မိန်ခလေးတွေကလည်းအတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိန်းဖို့ယောက်ကျာင်္းလေးတွေကလည်း တစ်ဖက်သားနစ်နာအောင် ပြောဖို့မသင့်တာကိုထောက်ပြပေးတာပါ...အမှားပါရင်တော့sorry ပါ...ReplyDeleteMcHlayApril 22, 2012 at 2:30 AMကိုယ်တော့ဆွေးပြီဝိုင်းစုရယ်ReplyDeletesan min naingApril 22, 2012 at 2:53 AMကောင်မလေး မမှတ်သေးဘူးနာချင်ပြန်ပြီထင်တယ်ReplyDeletesan min naingApril 22, 2012 at 2:55 AMမင်းလေးနားလည်သင့်ပြီ အရွဲ့တိုက်တာလား မင်းပဲခံရလိမ့်မယ် ကောင်မလေးReplyDeletethan htike winApril 22, 2012 at 5:46 AMအရသာသိသွားပြီလေReplyDeletelets get freak outApril 23, 2012 at 2:30 PMဘာချစ်သူအသစ်တုန်းကွ။ ဘုမသိဘမသိ ဖိုတိုလေးတခုရတာနဲ့ ခေါင်းစဉ်လာတတ်နေပါပီ။ လေတယ်ကွာ။ အသစ်မဟုတ်ဘာဘူးကွ တယောက်ထဲပဲ။ အနောက်က ခွေးတွေကလဲအစာမြင်လို့လိုက်ဟောင်နေကြပြန်ပါပီ။ReplyDeletemgtinttalApril 23, 2012 at 10:44 PMဘယ်ဈေပေါက်လဲဟေ့..................ReplyDeletelinlinApril 24, 2012 at 2:13 AMဟာ..ဘယ်ဈေးပေါက်လဲမမေးနဲ့တော့ရတဲ့ဈေးနဲ့လလိုက်ရင်လိုက်မှာ...ဒီတော့ငါလဲသိပ်မပြောချင်ပါဘူး..မခင်ဖုန်းရေReplyDeleteYu NandarJune 28, 2012 at 10:11 PMအချစ်သစ်ရှာတာကောင်းပါတယ်ReplyDeletecyberlink powerdvdJuly 17, 2012 at 12:28 PMလောကမှာလူတွေကနာမည်ကျော်ကြားမု့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးReplyDeleteAdd commentLoad more...